Celeb Style Mpahay Nahatratra Fironana #actagainstabuse Teknolojia Fanafody An-Trano Lakozia Maharitra Manjamaso Celeb Look Boky
Azonao atao ny mamafa ny cookies rehetra izay efa ao anaty solosainao, ary azonao atao ny mametraka ny ankamaroan'ny mpitety tranonkala hisorohana azy ireo tsy hapetraka. Na izany aza, raha manao izany ianao dia mety mila manitsy ny safidinao manokana isaky ny mitsidika tranokala ianao, ary mety tsy mandeha ny serivisy sy ny fampiasa sasany.
2) Tsarovy ny safidinao manokana momba ny fampisehoana (toy ny hoe tianao kokoa ny maneho hevitra na dia efa potika aza ny hevitrao)
Mety misy ihany koa karazana cookies hafa noforonina rehefa avy nitsidika an'ity tranonkala ity ianao. Mampiasa Google Analytics ity tranonkala ity, serivisy fanaovana fanadihadiana an-tranonkala malaza izay mampiasa cookies hanampiana amin'ny famakafakana ny fomba fampiasan'ny mpampiasa ilay tranonkala. Ny fampahalalana novokarin'ny cookie momba ny fampiasanao an'ity tranonkala ity (ao anatin'izany ny adiresy IP anao) dia hampitaina sy hotehirizin'i Google amin'ny mpizara any Etazonia. Hampiasa an'ity fampahalalana ity i Google mba hikajiana ny fampiasanao tranokala hafa, fanangonana tatitra momba ny asan'ny tranokala, ary fanomezana serivisy hafa mifandraika amin'ny hetsika tranokala sy ny fampiasana Internet. Google koa dia afaka mamindra an'ity fampahalalana ity amin'ny antoko fahatelo izay takian'ny lalàna, na amin'ny toeran'ny antoko fahatelo toy izany amin'ny anaran'i Google. Google dia tapa-kevitra ny tsy hampifandray ny adiresy IP-nao amin'ny data hafa tazonin'i Google.
Ireo orinasa ireo dia mety mampiasa cookies sy famantarana hafa hanangonana vaovao izay mandrefy ny fahombiazan'ny dokam-barotra. Amin'ny ankapobeny ny fampahalalana dia tsy azo fantarina manokana raha tsy, ohatra, manome vaovao azo fantarina manokana ianao amin'ny alàlan'ny doka na hafatra mailaka.
Ity tranonkala ity dia tsy manome fampahalalana manokana amin'ny dokam-barotra na amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Ny mpanao dokam-barotra sy ny antoko fahatelo hafa (ao anatin'izany ny tamba-jotra doka, orinasa mpanompo doka ary mpanome tolotra hafa ampiasain'izy ireo) dia mety hihevitra fa ireo mpampiasa izay mifanerasera na mikitika doka na votoatiny manokana dia ao anatin'ny vondrona anaovana doka na atiny. dia entina mankany (ohatra, ny mpamaky any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Pasifika izay mamaky karazana lahatsoratra sasany). Ary koa, ny cookies sasany avy amin'ny antoko fahatelo dia mety hanome azy ireo fampahalalana momba anao (toy ireo tranonkala izay nanehoana dokam-barotra na fampahalalana momba ny demografika anao) avy amin'ny loharano ivelan'ny Internet sy an-tserasera izay mety hampiasain'izy ireo hanome anao doka ilaina sy mahasoa kokoa.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny safidy azonao atao momba ny famerana ny fanangonana vaovao amin'ny tambajotran-doka misy ny antoko fahatelo, azonao atao ny mijery ny tranokalan'ny Initiative Advertising Network .
Afaka misafidy ny tsy handray anjara amin'ny tamba-jotra dokambarotra miorina amin'ny fahalianana ianao, fa ny fandroahana dia tsy midika hoe tsy hahazo doka amin'ny Internet intsony ianao. Midika izany fa ireo orinasa nisafidiananao dia tsy hanamboatra doka intsony arakaraka ny tombontsoanao sy ny lamina fampiasanao tranonkala amin'ny alàlan'ny teknolojia mifototra amin'ny cookie.
Ity tranonkala ity dia mifandraika amin'ny CMI Marketing, Inc., d / b / a CafeMedia (CafeMedia) ho an'ny fametrahana doka amin'ny tranokala , ary CafeMedia dia hanangona sy hampiasa angona sasantsasany ho an'ny tanjona dokam-barotra. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fampiasana angona CafeMedia, kitiho eto www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy
a) Mpamatsy tolotra miasa: Ity fifanarahana ity dia manana fifanarahana amin'ireo mpamatsy tolotra isan-karazany mba hanamorana ny fiasan'ny tranonkala. Ohatra, ity tranonkala ity dia mety mizara ny fampahalalana momba ny carte de crédit anao amin'ny mpanome tolotra carte de crédit anao hanodinana ny fividiananao. Ny mpanome tolotra fitantanan-draharaha rehetra izay ampiasain'ity tranonkala ity dia takiana mba hanana ambaratonga fiarovana manokana toa an'ity tranonkala ity, ka noho izany fikarakarana izany no hitondrana ny mombamomba anao. Ho fanampin'izany, ohatra, ity tranokala ity dia mety hampiasa serivisy an-tserasera na marketing toa ny Google Analytics, Google Adsense, Taboola, na RevContent, izay angoninao izay ekenao tsy misy fepetra.
(c) Fanadihadiana statistika: Ity tranonkala ity dia afaka mizara fampahalalana tsy miankina amin'ny tena manokana sy fampahalalana voangona amin'ny antoko fahatelo, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho an'ny tanjona dokam-barotra na marketing fotsiny. Tsy misy mombamomba anao manokana hozaraina amin'ity fomba ity.
(d) Fifampiraharahana: mifandraika amin'ny, na mandritra ny fifampiraharahana momba, ny fampitambarana, fivarotana fananana amin'ny orinasa, famatsiam-bola na fahazoana, na amin'ny toe-javatra hafa mety hampahafantarana na hamindrana ny mombamomba anao manokana ho fananana ara-barotra.
Mialà amin'ny tolotra fanaovana dokambarotra miorina amin'ny fahalianana : Ity tranonkala ity dia mpikambana ao amin'ny Initiative Advertising Network (NAI) ary manaraka ny Kaodin'ny fitondran-tena NAI araka ny voalaza ao amin'ny tranokala NAI. Ity tranonkala ity koa dia manaraka ny fitsipika momba ny fitsipika mifehy ny Digital Advertising Alliance (DAA). Raha mila famaritana ny Program DAA dia tsidiho azafady ny Tranonkala DAA .
Mialà amin'ny dokam-barotra miorina amin'ny fahalianan'ny antoko fahatelo : Raha te hahalala bebe kokoa momba ny dokambarotra mifototra amin'ny fahalianana amin'ny Internet sy ny fomba hialana amin'ireo fanangonana vaovao ho an'ity tanjona ity ataon'ireo orinasa mandray anjara amin'ny Network Advertising Initiative na ny Digital Advertising Alliance, tsidiho Pejy opt-out an'ny NAI na Pejy Safidin'ny mpanjifa DAA .
Sokajy Fahasalamana Ara-Tsaina Levitra Fitaizana
tombony azo avy amin'ny ranom-boankazo sy ny vokany
manapaka zazalahy ho an'ny vehivavy
20 karazana alika mahay indrindra
torohevitra voajanahary hanalana ny volo amin'ny tarehy
fanazaran-tena mampihena ny tavy kibo
vahaolana olan'ny volo ao an-trano